Yimaphi ama-blouses nama-sweaters okumele akhethe abesifazane abaphelele ukuba bangenakuvinjelwa?
Ukunciphisa ubuncane kanye nemvelo yizinto ezihamba phambili ezenzakalweni zonyaka we-Autumn-Winter 2015-2016. Ayikho imibala, imibala, imibala enemibala kanye nama-voluminous appliqués! Ama-Blouses nama-sweaters of imibala elula futhi enemibala - lokhu kumele kube nayo yonke i-pyshechek ephathekayo ngenkathi ezayo.
Ukukhwabanisa kwefeshini kubesifazane abagcwele, isithombe
Amantombazana aseLush avame "ukuhlupheka" ngothando lwe-hoodies nezambatho ezinjenge-sack. Ama-blouses angenawo ama-volumetric angenye yeziphambeko eziyinhloko zabesifazane abaningi. Izambatho ezinjalo ziphenduka kalula intombazane enomkhuhlane ibe ngumama omncane. Ngakho-ke, ukukhetha i-blouse, egcwele abesifazane kudingeka ikhethe izinto ezifakwe othomeni nge-V-intamo. Lesi sitayela sihlale sisebenza futhi sigcizelela isithunzi salo. Ekupheleni kuka-2015, ama-blaff of chiffon, isilikhi, ne-satin azofaneleka. Kuvinjelwe, imibala yemvelo emnyama (i-grey, eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okwesibhakabhaka), amamodeli anjalo afanelekile ukusebenzela ehhovisi.
Ngokuzilibazisa nokuzijabulisa, amantombazane aphelele kudingeka akhethe amahembe we-blouse. IJeans emnyama nehembe eligodini - nesithombe esimfashini ngesitayela esivamile siyilungile! Izingubo zokugqwala ezikhanyayo zisika kahle futhi njengesisekelo sesithombe sebhizinisi. Zama ukuhlanganisa lesi sitayela ngezingubo zakudala noma isiketi sepensela. Ungakwazi ukugqoka i-blouse-shirt, khona-ke kuzosiza ukulungisa ukuma kwezinqunu. Futhi ungangena esikhwameni noma e-jeans, kodwa kuphela uma unesisu esincane.
Lokhu kuwa kuzoba amabala afanelekayo ngemibala egcwele: i-emerald, indigo, i-fuchsia, emnyama, i-burgundy. Ngokuqondene namaphethini, kukhona umugqa oqondile, ama-motifs ezimbali kanye namafomethi we-geometri emfashini. Ungakhohlwa ukulawulwa kwegolide: ama-blouses avela kumpahla amancane angcono ukukhetha i-monochrome, futhi amamodeli avela kumathengi emoyeni angaba variegated.
Omunye umzuzu obalulekile wesitayela yizesekeli. Ngokuhlanganiswa ne-blouse kanye nesiketi, sebenzisa ngesibindi ibhande elikhulu lesikhumba, i-basque ekhanyayo nezinhlobonhlobo ezinkulu zezimpahla zokugqoka zemidwebo. Okuthandwa kakhulu kule nkathi kuyoba ubucwebe emapulini nasetsheni.
Izindwangu ezenziwe ngemfashini zabafazi abagcwele Ubusika 2016
I-Knitwear iyinhloko yebusika elizayo. Abadwebi bezithombe basikisela ukuthi abesifazane abanamafomu kumele bathole amakhadi ahlotshisiwe abanjwe amathunzi amnyama. Zihlanganiswe ngokugcwele nesiketi esifudumele se-tweed, ne-panty jeans. Izoba ngefashini nama-sweaters nge-collar - ijoka leboya lemvelo. Abaqambi bayeluleka lapho bekhetha i-sweater, okokuqala, ukuqondiswa ubude bayo, kunokuba isitayela. Ijezi elungile lomfazi ogcwele kufanele limboze kalula indawo yenkinga, kodwa kungenjalo kungabi naye kuye ezingeni elifanayo.
Futhi, amantombazane ahle kakhulu afaneleka ama-sweaters kanye ne-pullovers ngentamo eyindilinga kanye nesigxobo esimisiwe.
Izixazululo zangempela zombala, kanye namamodeli wokuthutha abesifazane abagcwele, ungabona esithombeni esingezansi.
Iziketi zokugcwele, ekwindla-ebusika 2015-2016, isithombe
Ibhantshi yabesifazane abagcwele, i-Autumn-Winter 2015-2016
Izindlela zokulwa nezinambuzane ezinobungozi
Isaladi elula kusuka ku-avocado
Imfihlo Yendlu-Ukudla Kwezinkukhu Zezinkukhu
Isaladi "eluhlaza" ne-avocado kanye noshizi
Isobho esivela emaceleni omisiwe
Indlela yokwenza izimonyo zemvelo zemvelo?
Indlela yokuqala ukuhlala kahle
Isitshalo sezindlu Anthurium
Izimfihlo eziyisihlanu ze-makeup zamehlo aluhlaza: engeza charm kumfanekiso wakho!